Antony 4 ilanao fisavana polisy manara-penitra: Araho ity mba hisorohana ny fisamborana ny fitsidihana an'i Dubai mandritra ny COVID
Torohevitra fiarovana ho an'ny mpandeha mba hisorohana ny fisamborana mety alohan'ny fitsidihana an'i Dubai na any Emirà Arabo Mitambatra: "Fizahana polisy mahazatra" mandritra ny COVID-19.
Torohevitra fiarovana ho an'ny mpandeha mba hisorohana ny fisamborana mety alohan'ny fitsidihana an'i Dubai na any Emirà Arabo Mitambatra: “Fizahana polisy mahazatra”
Raha mikasa ny hitsidika an'i Dubai na any Emirà Arabo Mitambatra ianao dia tsara ho anao ny mahatakatra ny antony ilainao ny "fanaraha-maso polisy mahazatra."
Dubai dia toerana tsara ho an'ny mpandeha, fa ny lalàna sy ny kolotsaina eo an-toerana dia samy hafa tanteraka. Ny mpitsidika dia azo samborina sy melohina amin'ny heloka tsy fantany akory. Amin'ny toe-javatra ankehitriny, ny fanaraha-maso ny filaminana dia ampahany lehibe amin'ny dia an-dranomasina. Noho izany, ny mpitsangatsangana dia asaina manao fikarohana vitsivitsy mba hitandremana mialoha ny handehanana any amin'ny firenena hafa.
UAE dia nametraka lalàna henjana kokoa momba izay tokony hatao na tsia mandritra ny fitsidihanao noho ny areti-mifindra ateraky ny COVID-19. Ny governemanta UAE dia nanome koa protokolola sy torolàlana momba ny quarantine hanarahana mba hisorohana ny fihanaky ny viriosy.
Miaraka amin'ny fanomanana am-pitandremana, ny fahalalana ny lalàna eo an-toerana, ary ny fahatsapana kely mahazatra, dia tokony hisoroka olana ianao. Nanomana sasantsasany amin'ireo torohevitra azo antoka izahay ho an'ireo mpandeha mitsidika an'i Dubai mba hisorohana ny fisamborana azy eto ambany:
Ny kitapo arahana maso avela any amin'ny seranam-piaramanidina UAE dia tokony hanana farafahakeliny iray farafahakeliny ary tsy tokony hanana tadiny lava. Ny kitapo miendrika tsy ara-dalàna sy be loatra dia holavina.
Isa farafahakeliny: 2
Haben'ny Maximum: 90x75x60 cm
Lanja farany ambony: 32kg.
Ny kitapo izay tsy mifanaraka amin'ny valizy mahazatra dia hozahana ao amin'ny kaonteran'ny entana be loatra.
Ho an'ny entana entin'ny tanana, ny fetra farany ambony ho an'ny entana misy ranoka avelan'ny seranam-piaramanidina UAE ho fonosina amin'ny plastika azo fehezina azo ahidy dia 100ml, ary ny entana feno dia tsy tokony hihoatra ny 1 litatra.
Ho an'ny enta-mavesatra voamarina, ny fiarovana ny seranam-piaramanidina UAE dia tsy mametraka fetra voafaritra tsara amin'ny habetsaky ny ranona azon'ny olona miditra.
Saingy, ny fadin-tsain'i Abu Dhabi dia mametra ny mpandeha amin'ny alikaola 4 litatra rehefa mandeha any UAE.
Ny polisy UAE dia mitazona hatrany ireo hetsika ara-bola mampiahiahy, indrindra ny fanaovana raharaham-barotra mifandraika amin'ny famotsiam-bola, voasazy ao ambany Lalàna momba ny fanapahana federaly No. 20/2018. Noho izany, ny mpandeha dia takiana hanambara hoe ohatrinona ny vola entiny.
Ny lalàna UAE dia mamela ny mpandeha hitondra fetra DH100,000 farafahakeliny, na zahao ireo mpandeha raha toa ka mihoatra ny 18 taona ilay olona.
Hentitra ny governemanta UAE amin'ny fampiharana azy mikasika ny famerana ny fitondrana karazana fanafody sasany. Ho an'ny mpandeha mba hitondra soa aman-tsara ny fanafody ataon'izy ireo fa voarara any UAE, dia tokony hanana miaraka amin'ny dokotera ny dokotera.
Ny entana norarana, araka ny filazan'ny minisiteran'ny fahasalamana
Ny rongony rongony isan-karazany dia voarara ihany koa any UAE, miaraka amin'ny entam-barotra avy amin'ny firenena ankivy.
Ho an'ny lisitr'ireo fanafody fady voarara any UAE dia tsidiho ny Tranonkala Ministeran'ny Fahasalamana.
Raha fintinina, araka ny Dubai Customs, ny fananan'ny mpitsangatsangana irery ihany no avela hiditra ao amin'ny haba.
Antony ilainao ny fanamarinana polisy mahazatra
Ny firenena rehetra dia manana fanaraha-maso ataon'ny polisy matetika. Ny fizahana ny polisy dia miantoka ny fahasalamana, fiarovana, fiarovana ary ny fiadanan'ireo olona monina ao.
Androany, na izany aza, ny tontolo iray manontolo dia sahirana mamehy ny fiparitahan'ny COVID-19. Noho izany, ny governemanta UAE dia namoaka torolàlana maro ho an'ny mponina sy ny mpandeha mankany Dubai ary ny sisa amin'ny UAE. Ny fepetra takiana dia nanomboka tamin'ny 31 Janoary 2021.
Ilaina ny fanamarinana polisy mahazatra mba hanomezana toky fa ara-dalàna sy ara-dalàna ny fitsidihanao any UAE. Alohan'ny hamandrihanao ny sidinao dia alao antoka fa hahazoana visa fahazoan-dàlana ianao. Ny fahazoana visa dia miankina amin'ny zom-pirenentsika, na azonao atao izany amin'ny fahatongavanao na amin'ny alàlan'ny fangatahana miaraka amin'ny fifindra-monina any Dubai ho an'ny visa fitsidihana efa voarindra.
FANDROSOANA / FITSIPIHANA NY TRAVEL
Noho ny halehiben'ny tahan'ny aretina vokatry ny COVID-19, dia tsy mahazo miditra any Dubai ireo mpitsangatsangana sy mpandeha an-tsambo namakivaky an'i Afrika Atsimo na Nizeria tao anatin'ny 14 andro lasa. Ity fameperana fitsangatsanganana ity dia tsy mihatra, na izany aza, ho an'ireo teratany UAE miverina sy mpikambana ao amin'ny iraka diplaomatika.
3. COVID-19 PRCR TEST AND LABORATORIES
Noho ny fahatongavan'ireo vaksinim-panafody misy eny an-tsena, dia afaka mamandrika sidina any amin'izay firenena tiany hotsidihina ireo mpandeha. Na izany aza, ny olona mandeha any Emirà Arabo Mitambatra dia tsy maintsy mbola mahafeno ny fenitra takiana alohan'ny hidirany amin'ireo tanànany. Ohatra, alohan'ny handehananao mankany Dubai dia tsy maintsy miantoka mari-pahaizana fanadinana COVID-19 PCR ratsy tsy latsaky ny 72 ora alohan'ny hiainganao. Ny teratany UAE dia tsy manan-kery amin'ny fanadinana fa hosedraina rehefa tonga. Ny zaza latsaky ny 12 taona sy ny mpandeha izay manana fahasembanana antonony na mafy dia tsy afa-mivoaka amin'ny fitsapana PCR ihany koa.
Etsy ankilany, ny mpikambana ao amin'ny iraka diplaomatika avy any Nizeria dia tsy maintsy mbola manolotra fanadinana COVID-19 PCR ratsy avy amin'ireo laboratoara nahazo alàlana ao amin'io firenena io.
Ankoatr'izay, ireo mpitsangatsangana sy mpizahatany izay maniry hiverina na hitsidika ny UAE dia tsy maintsy mampiseho fitsapana PCR ratsy ao anatin'ny 96 ora alohan'ny dia. Ireo mpitsoa-ponenana izay mitazona visa any Dubai dia tokony hahazo fankatoavana avy amin'ny Direction général des résidence sy ny raharaham-bahiny mba hahazoany alalana hiverina any Dubai.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny protokolom-pahasalamana sy fiarovana ampiharina isaky ny tanàna dia tsidiho ny Porta fampahalalana sy serivisy an'ny UAEl.
4. FEPETRA TRANSIT
Ireo mpandeha amam-pitaterana avy any amin'ny firenena voafaritry ny torolàlana dia mila manolotra mari-pankasitrahana COVID-19 PCR ratsy ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hiaingany. Ny fitsapana Polymerase Chain Reaction (PCR) ihany no ekena, ary ny mpandeha dia tsy maintsy mametraka ny taratasy fanontana ofisialy amin'ny teny anglisy hiditra ara-dalàna any Dubai.
Raha mikasa ny hitsidika an'i UAE ianao, dia alao antoka fa mijery amin'ny biraon'ny polisy eo an-toerana ianao momba ny olana ara-dalàna. Hamarino tsara fa tsy manana olana ara-dalàna ianao rehefa miditra na miditra any Emirà. Mifandraisa aminay amin'ny fisavana heloka bevava, polisy, raharaha na fifindra-monina any UAE na Dubai.
1 hevitra momba ny “Antony 4 Maninona Ianao no Mila Fanamarinana Polisy Manokana: Torohevitra fiarovana ho an'ny mpandeha mba hisorohana ny fisamborana mety alohan'ny fitsidihana an'i Dubai na any UAE.”
Oktobra 31, 2018 amin'ny 9: 09 am
Ny vadiko dia nanao fisavana tampoka ka niafara tamin'ny raharaha iray. Nipetraka tany amin'ny banky aho ary nahazo taratasy famotsorana ary nankany amin'ny polisy hanafoana an'io tranga io. Te hitety ny UAE (Dubai) izao ny vadiko ary tiako ny hanamarina raha toa ka misy tranga mandeha manohitra azy, ka tsy voatana rehefa tonga any Dubai
Ashley on Ireo karazana fanafihana